Aaron Ramsey nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Welsh Aaron Ramsey bụ nwata Akụkọ nke na-agbaghaghị eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Rambo".
Ụdị akụkọ ndụ Aaron Ramsey's Facts, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume ndị ama ama n'oge ọ bụ nwata. Anyị na-aga n'ihu ịgwa gị otú Erọn si nwee ihe ịga nke ọma n'egwuregwu ahụ mara mma.
Nyocha nke Ex-Arsenal na Welsh Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ OFF na ON-Pitch ihe ndị amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya, ma ole na ole tụlee anyị Aaron Ramsey Biography, nke na-akpali nnọọ mmasị. Ugbu a, na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Aaron Ramsey Akụkọ nke Storymụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Aaron James Ramsey na 26th ụbọchị nke December 1990 na Caerphilly, Wales, United Kingdom na nne na nna ya, Kevin Ramsey (nna) na Marlene Ramsey (nne).
Ya na nwanne ya nwoke toro, Josh Ramsey toro. Ha abụọ dị otu afọ site na ibe ha ma dị ezigbo nso.
Aaron Ramsey na nwa nwoke nwoke nwoke, Josh- Childhood Days.
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Ramsey gara Rhymney Valley Comprehensive School na Caerphilly County Borough, Wales.
Nkwalite mbụ ya na football bụ mgbe ọ dị afọ itoolu mgbe ọ gara nnọkọ ọzụzụ Urdd na Caerphilly.
Tupu ọ gbanwee n'egwuregwu football, ọ bụ onye na-egwu egwuregwu ịgba egwu na egwuregwu. Dị ka nwata akwụkwọ, ọ na-egwuri egwu maka mmemme mmepe ntorobịa Caerphilly RFCs. O sonyekwara na ịgba egwuregwu ịgba egwuregwu.
Ndị na-egwu egwuregwu rugby bịakutere Aaron Helens mgbe ọ gụsịrị egwuregwu ntorobịa megide ha.
N'ụzọ dị mwute, mgbalị ha ịbanye na ya kụrụ afọ n'ala. Ọ tinyeworị pen na akwụkwọ maka agụmakwụkwọ ntorobịa nke Cardiff City bụ onye zuuru ya n'ụlọ akwụkwọ ya n'afọ 1999.
Aaron Ramsey Biography - Ọrụ na Nchịkọta:
Ọ gbara egwu dị ka nwata akwụkwọ maka Cardiff City, ebe ọ nọrọ afọ asatọ na bọọlụ ntorobịa. Ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ nke ọdụdụ na klọb (onye gbara naanị afọ 16 na ụbọchị 124) wee mee ngosi 22 maka ndị otu egwuregwu - gụnyere 2008 FA Cup Final.
Na 10 June 2008, e kwadoro na mgbe o zutere ndị isi na Arsenal, Everton na Manchester United, Ramsey abanyela na Arsenal, bụ onye kwụrụ Cardiff City na ngụkọta nke £ 4.8 maka onye ọkpụkpọ ahụ.
dị nnọọ ka Jack Wilshere na Theo Walcott mere, Erọn nwetara ngwa ngwa nke mbụ Wenger.
Otú ọ dị, ọrụ ya kwụsịrị mgbe ọ gbasasịrị ụkwụ na egwuregwu megide Stoke City na February 2010.
Mgbe ịgbazinye ego abụọ si na Arsenal pụọ, ọ laghachiri na ahụike zuru oke ma weghachi onwe ya dị ka onye na-amalite mgbe niile. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Ndụ Aaron Ramsey:
Aaron Ramsey bụ Welsh site na mmalite na dịka Gareth Bale, dị mpako ịbịa site na nzụlite ezinụlọ Welsh dị n'etiti.
A mụrụ nne na nna ya ma zụlite na obodo akụkọ ihe mere eme nke Caerphilly, South Wales.
Aaron Ramsey Nna:
Ọtụtụ mgbe, ọ na-enwe mmasị iso nna ya, Kevin Ramsey zuru ike, oge ọ bụla ọ bịara ileta.
N'okpuru ebe a, mba ndị Wales lere anya nke ọma ka ya na nna ya nọrọ jụụ na New Year's Eve. Ọ bụ ụbọchị ọmụmụ ụbọchị ọmụmụ Kevin Ramsey. Nwa ya nwoke Aaron dere na peeji nke Instagram: "Obi ụtọ ụbọchị ọmụmụ nna m 🎉🎈🎁"
Kelvin na nwa ya nwoke, Aaron.
Nne Aaron Ramsey:
Dịka o mere nna ya, Aaron Ramsey kesara foto nne ya, Marlene Ramsey, na Instagram, na-eme ememe ụbọchị ọmụmụ ya.
O doro anya na nke a bụ ihe ngosi dị mma site na mba ndị Wales. N'ụzọ dị mwute, o nwere ike ịbụ na ọ kwadebere maka nzaghachi nke foto a sitere n'aka ọha na eze.
Ọtụtụ ndị ọrụ Instagram kpọrọ Marlene Ramsey dị ka ndị mara mma ma baa uru idina ụra. Nke a wutere Aaron Ramsey nke ukwuu.
Nwanna Aaron Ramsey:
Mgbe Aaron Ramsey chọtara ụzọ iji na-arụsi ọrụ ike n'oge ezumike mba ma ọ bụ n'oge mmerụ ahụ, ọ na-eche naanị otu ihe.
“Visga ileta ndị mụrụ ya, n'ezie, otu nwanna nwoke ya na ya na-anọkarị”.
Ọ na-agbaji ma ọ bụ na-agagharị onwe ya site na mmerụ ahụ site na ịnụ ụtọ ntụ ntụ ụrọ na nwanne ya nwoke, Josh. Ọ na-emekwa nke a iji mee ncheta ọmụmụ ya.
Aaron Ramsey Ome kporo ya na nwanne ya nwoke
Colleen Rowlands Aaron Ramsey Storyhụnanya Akụkọ:
Ndị na-agba ọsọ na Welsh edetụla ịhụnanya. Ramsey lụrụ obi nwata na nwa mara mma Colleen Rowlands na Caldicot Castle na Monmouthshire, Wales na 8 June 2014.
Ndị enyi abụọ ahụ lụrụ na 2014. N'okpuru ebe a na-egosi foto nke Aaron Ramsey jetting agbamakwụkwọ ya na ụdị site na chopper.
Aaronbọchị Aaron lụrụ Colleen.
Ndị otu a gwara ndị ọbịa ka ha nye ego maka ọrụ ebere nke Parkinsons UK karịa inye onyinye maka agbamakwụkwọ ha.
Mgbe ememe ahụ gasịrị, Erọn na Coleen na-aga Venice maka ezumike ha ma nye ọtụtụ ozi na saịtị netwọk mmekọrịta.
Aaron Ramsey na nwunye ya bụ Colleen emeela ememe ọmụmụ nke nwa mbụ ha, nwa nwoke ahụike. Ramsey kesara ihe oyiyi nke obere ụkwụ ya karịa nke ya na Twitter, Instagram na Facebook.
Rambo Junior dị ka amara ya na-eto eto ugbu a. N'okpuru ebe a bụ foto nke Rambos.
Aaron Ramsey ọnụ:
N'ụzọ na-enweghị obi ụtọ, Welshman adịghị enwe obi ụtọ dị ukwuu n'usoro isiokwu a dị iche iche nke na-abawanye na ịntanetị.
Ọ dịwo anya e kwuru na mgbe Aaron Ramsey gụrụ maka Arsenal, ndụ ndị a ma ama dị n'ihe ize ndụ. Nke a dị ka ọtụtụ ndị ga-akpọ ya “Nkọcha nke Aaron Ramsey”.
Dika odi ka odi ka ogadi, onwere otutu ndi ama ama ndi nwuru anwu ma obu ubochi ole ma ole mgbe eburu Ramsey. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido…
Na 1st nke May 2011, Ramsey meriri na mmeri 1-0 megide Man United. N'echi ya, 2 Mee 2011, Osama Bin Laden nwụrụ.
Osama bin Laden bụ onye guzobere al-Qaeda, nzukọ nke na-ahụ maka mwakpo September 11 na United States.
2 October 2011, Ramsey meriri na mmeri 2-1 megide Tottenham.
Mgbe e mesịrị na 5th nke October 2011, Steve Jobs nwụrụ. Steve Jobs bụ onye isi oche, onye isi ọrụ, yana onye nchoputa Apple Inc.
Na 19th nke October 2011, Ramsey meriri na mmeri 1-0 megide Marseille. N'echi ya, 20 October 2011, Colonel Gaddafi nwụrụ. Gaddafi bụ onye nnupụisi nke Libya, onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Na 11th nke February 2012, Ramsey meriri na mmeri 2-1 megide Sunderland. N'ụzọ dị mwute, n'otu 11th nke February 2012, Whitney Houston nwụrụ.
Tupu ọnwụ ya, Whitney bụ onye America na-agụ egwu, onye na-eme ihe nkiri, onye na-emepụta ihe na onye nlereanya.
Na 30th November 2013, Ramsey meriri ugboro abụọ na mmeri 3-0 megide Cardiff. N'otu ụbọchị ahụ 30 November 2013, Paul Walker nwụrụ.
Tupu ọnwụ ya, Paul bụ onye omee America nke amaara amara maka ọrụ ya dị ka Brian O'Conner na aha ngwa ngwa na oke iwe.
Na 10th ụbọchị nke August 2014, Ramsey meriri na mmeri 3-0 megide Man City. N'echi, 11 August 2014, Robin Williams nwụrụ.
Robin tupu ọnwụ anwụọ bụ onye ọchịagha America na onye omee.
Na 9th nke Jenụwarị 2016, Ramsey meriri na mmeri 3-1 megide Sunderland. N'echi ya, 10 Jenụwarị 2016, David Bowie nwụrụ. David bụ onye Bekee na-agụ abụ, onye na-ede abụ na onye na-eme ihe nkiri.
Na 13th nke Jenụwarị 2016, Ramsey nwetara akara na 3-3 megide Liverpool. N’echi ya, 14 Jenụwarị 2016, Alan Rickman nwụrụ.
Tupu ọnwụ, Alan bụ onye England na-eme ihe nkiri na onye ntụzi ama maka ịrụ ọtụtụ ọrụ na ogbo na na ihuenyo.
Na 5th March 2016, Ramsey nwetara akara na 2-2 megide Tottenham. N'echi, 6th March 2016, Nancy Reagan nwụrụ.
Nancy bụ onye nkiri ihe nkiri America na nwunye Ronald Reagan, Onye isi 40th nke United States.
Mgbe Ramsey meriri megide Leicester na 11th nke August, 2017. Icon Television Bruce Forsyth nwụrụ na 18th nke August, 2017.
Tupu ọnwụ, Bruce bụ onye Britain na-eme ihe nkiri, onye na-eme ihe nkiri, onye na-akpa ọchị, onye na-agụ egwú, onye na-agba egwu, na onye edemede ederede nke ọrụ ya karịrị afọ 75.
Ọzọkwa, Ramsey meriri na 5 - 2 merie Everton na 22nd nke Ọktoba, 2017. Twobọchị abụọ mgbe nke ahụ gasịrị na 24th nke October 2017, Robert Guillaume nwụrụ.
Robert Guillaume bụ onye omee America, amaara maka ọrụ ya dịka Isaac Jaffe na Night Night yana Benson na nsonye TV na Soap na Benson.
Robert Guillaume bụ onye nkiri America, a maara maka ọrụ ya dịka Isaac Jaffe na Egwuregwu Egwuregwu na dịka Benson na nsonye TV na Shiol na Benson, nakwa maka ịkọ ụda Rafiki dị egwu na Eze Lion.
Aaron Ramsey Biography Eziokwu - Ndị Na-akwado Anụmanụ:
Ramsey bụ onye na-akwado World Wildlife Fund ma kwuo maka ya “Ahuhu” maka ụmụ anụmanụ na nchekwa ha.
Enwekwu nghọta banyere ụbọchị ọrụ ebube nke oge nwata ya:
N'ụlọ akwụkwọ sekọndrị Aaron Ramsey na ndagwurugwu Rhymney na South Wales, onye nkụzi ya bụ Jeremy Evans na-amụmụ ọnụ ọchị mgbe ọ na-echeta ụbọchị mgbe a kpọrọ nwa akwụkwọ kpakpando ya ka ọ bụrụ ndị otu mbụ nke Cardiff.
"Echetara m ya nke ọma," Evans, bụ isi nke PE na Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, kwuru.
“Isi nke afọ ahụ bịakwutere m ịsị na ọ ga - akpọ oku na Cardiff City, na - arịọ ka ụlọ akwụkwọ nyere ikike ka Erọn kpọọ na Satọde megide Hull.
Anyị ga-esi na mbara èzí kpọọ Erọn ma ọ ga-ahụ isi nke afọ ya ịkọwa ihe merenụ. ”
Dika umu akwukwo ihe nlere nke guru akwukwo na Welsh na 10 GCSE ma were ya dika ihe omuma nke mahadum, Ramsey enweghi ihe mere o ga-eji tu egwu na a na-acho ya ka o kwuo okwu.
Kama, ọ na-achọ ịmepụta akụkọ ihe mere eme. Afọ 16 na 124 ụbọchị, Ramsey weghaara John Toshack dị ka onye ọkpụkpọ ọdụdụ nke Cardiff mgbe ọ pụtara dị ka onye nnọchi megide Hull City na Eprel 2007.
A matara ebe ya na akwụkwọ ndekọ Cardiff n'ụlọ akwụkwọ ahụ, ebe foto nke ihe Ramsey rụzuru maka klọb na mba na-achọ paseeji mma ma na-enye mmadụ niile mmụọ nsọ.
Aaron Ramsey Branddị nkeonwe:
Na Jenụwarị 2014 Ramsey bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta nhazi ihe ngosi na Elite Model Management London. Onye nkwado Ramsey bụ Adidas. O mechara jikọta ya na nke New Balance. O nwekwara, kemgbe 2014, bụ onye nnọchi anya akara maka McDonald's.